Kuva Mudzidzi waJesu Haisi Nyaya Yekutamba Nayo | Upenyu hwaJesu
Kuva Mudzidzi waJesu Haisi Nyaya Yekutamba Nayo
ZVOKUFUNGA NEZVAZVO KANA UCHIDA KUVA MUDZIDZI
Jesu ataura zvidzidzo zvinokosha zvikuru paanga ari kudya pamba pemumwe mutungamiriri wevaFarisi. Sezvaanoenderera mberi nerwendo rwake rwekuJerusarema, vanhu vakawanda vanoenda naye. Nechikonzero chei? Vari kuda kunyatsova vateveri vake vechokwadi here pasinei nezvavangazotarisirwa kuita?
Vachifamba kudaro Jesu anotaura mashoko anoita kuti vamwe vaari kufamba navo vatye paanoti: “Kana munhu akauya kwandiri, akasavenga baba vake naamai nomudzimai nevana nevanun’una nehanzvadzi, chokwadi, kunyange mweya wake, haangavi mudzidzi wangu.” (Ruka 14:26) Asi mashoko ake iwayo anorevei?
Jesu haasi kuti vanhu vachava vateveri vake vanofanira kutovenga hama dzavo. Asi vanovavenga pakuti havavade semadiro avanoita Jesu. Havaite sezvakaita murume uya wemumufananidzo wemabiko emanheru uyo akaramba kuenda paakakokwa achiti akanga achangobva kuroora. (Ruka 14:20) Tateguru wevaJudha, Jakobho, anonzi ‘aivenga’ Reya uye aida Rakeri, kureva kuti aida Rakeri kupfuura mukoma wake Reya.—Genesisi 29:31.
Cherechedza kuti Jesu ati mudzidzi anofanira kuvenga “kunyange mweya wake,” kureva upenyu hwake. Izvi zvinoreva kuti mudzidzi wechokwadi anofanira kuda Jesu kupfuura kuda kwaanoita upenyu hwake, zvokuti angatobvuma kurasikirwa nahwo kuti aratidze kuti anonyatsomuda. Saka kuva mudzidzi waKristu inyaya isiri yekutamba nayo. Munhu anofanira kunyatsofungisisa asati asarudza kuva mudzidzi waKristu.
Kuva mudzidzi kunogona kuita kuti munhu aomerwe uye atambudzwe sezvinoratidzwa naJesu paanoti: “Munhu wose asiri kutakura danda rake rokutambudzikira achinditevera haagoni kuva mudzidzi wangu.” (Ruka 14:27) Mudzidzi wechokwadi waJesu anofanira kubvuma kutambudzwa sezvakaitwa Jesu. Jesu akatotaura kuti achaurayiwa nevavengi vake.
Saka vanhu vari kufamba naJesu vanofanira kunyatsoongorora kuti kuva mudzidzi waKristu kunosanganisirei. Jesu anotaura mufananidzo unosimbisa izvi. Anoti: “Somuenzaniso, ndiani wenyu anoti kana achida kuvaka shongwe asingatangi agara pasi, overenga zvinodiwa, kuti aone kana aine zvakakwana zvokuipedza nazvo? Kana akasadaro, angavaka nheyo yayo asi okundikana kuipedza.” (Ruka 14:28, 29) Saka kana vanhu vaari kufamba navo achienda kuJerusema vachida kuzova vadzidzi vake, vanofanira kutanga vanyatsofunga vasati vaita chisarudzo ichi. Anosimbisa pfungwa iyoyo nekutaura mumwe mufananidzo zvekare:
“Ndimambo upi, anoti kana achienda kunorwa nomumwe mambo, asingatangi agara pasi orangana nevamwe kana achikwanisa aine varwi zviuru gumi kurwisana nouya anouya kuzorwisana naye aine varwi zviuru makumi maviri? Chokwadi, kana asingagoni kudaro, iyeye paanenge achiri kure iye anobva atuma boka revamiririri okumbira rugare.” Kuti anyatsosimbisa pfungwa yacho, Jesu anoti: “Nokudaro, mungava nechokwadi chokuti, hapana nomumwe wenyu asingasiyi zvinhu zvake zvose anogona kuva mudzidzi wangu.”—Ruka 14:31-33.
Zviri pachena kuti Jesu haasi kutaura mashoko aya kuvanhu vaari kufamba navo chete. Vose vanenge vadzidza nezvaKristu vanofanira kuita zvinoenderana nemashoko aataura. Izvi zvinoreva kuti vanofanira kubvuma kurasikirwa nezvose zvavainazvo, kunyange upenyu hwavo kana vachida kuva vadzidzi vake. Ndizvo zvimwe zvinhu zvinofanira kunyengetererwa uye kufungwa nezvazvo.
Jesu anotaura imwe nyaya yaakambobata-bata muMharidzo yake yepaGomo yokuti vadzidzi vake “munyu wenyika.” (Mateu 5:13) Anofanira kunge aireva kuti vadzidzi vake vanobatsira vanhu kuchengetedza manamatiro avo netsika kuti zvisaore sezvinongoita munyu uyo unochengetedza zvokudya kuti zvisaore. Iye zvino paava kupedzisa ushumiri hwake, anoti: “Chokwadi, munyu wakanaka. Asi kana munyu usisavaviri, ucharungwa nei?” (Ruka 14:34) Vateereri vake vanoziva kuti mumwe munyu unenge uine marara zvoita kuti usashandisike.
Saka Jesu ari kureva kuti kunyange vaya vava nenguva vari vadzidzi havafanire kuita kuti chido chekuva vadzidzi vake chidzikire. Kana izvozvo zvikaitika vanenge vasisabatsire kungofanana nemunyu usisavave. Nyika inogona kubva yavaseka. Zvakatonyanya kuipa ndezvekuti vanenge vasisakodzeri kuna Mwari, vachitoshoresa zita rake. Jesu anosimbisa kuti sei zvakakosha kuti munhu asarega izvozvo zvichiitika paanoti: “Ane nzeve dzokunzwa, ngaanzwe.”—Ruka 14:35.
Jesu anorevei paanoti mudzidzi anofanira “kuvenga” hama dzake, kunyange “mweya wake”?
Chidzidzo chipi chiri mumufananidzo waJesu wekuvaka shongwe uye wamambo ane uto rake?
Ipfungwa ipi iri kubudiswa naJesu paari kutaura nezvemunyu?